gvSIG Batoví, unikezelo lokuqala lwe-gvSIG yezeMfundo luboniswa-iGeofumadas
NgoSeptemba, 2012 Ukufundisa i-CAD / GIS, GvSIG
Ukusetyenziswa kwamazwe aphesheya kunye nokuxhotyiswa okulandelwa sisiseko se-gvSIG sinomdla. Akunamava amaninzi afanayo, akuzange ngaphambili isoftware yasimahla ivuthwe njengoko injalo ngoku, kwaye imeko yelizwekazi liphela ekwabelana ngolwimi olusemthethweni inomdla. Ukufikelela kwinqanaba leshishini sele kunesiqalo sakho, ukufikelela kwinqanaba lemfundo ngokuqinisekileyo kuya kuba sisiqinisekiso sokuzinza ukuba ngaba kwenziwa inkxaso kwimigaqo-nkqubo eyayixhasayo.
UMphathiswa Wezothutho neMisebenzi Yoluntu yaseUruguay, unikezele ngoLwesine wokugqibela uGvSIG Batoví, ukusasazwa kwe-Uruguayan yokuqala eyenza i-gvSIG Educa.
I-gvSIG Educa yindlela yokwenza i-Desktop yolwazi yasimahla ye-gvSIG Desktop, ehlengahlengiswe njengesixhobo semfundo yezifundo ezinendawo yokuhlala. I-gvSIG Educa ijonge ukusebenza njengesixhobo sootitshala ukuququzelela ukuhlalutya nokuqonda intsimi yabafundi, benethuba lokuziqhelanisa namanqanaba ahlukeneyo okanye iinkqubo zemfundo. I-gvSIG Educa iququzelela ukufunda ngokunxibelelana kwabafundi ngolwazi, ukongeza icandelo lendawo ekufundweni kwezifundo, kunye nokuququzelela ukwenziwa kweekhonsepthi kusetyenziswa izixhobo ezinjengeemephu ezibonakalayo ezinokunceda ukuqonda ubudlelwane beendawo.
I-gvSIG Batoví yile, ngale ndlela, ukumiliselwa kwesoftware yasimahla enokuthi ihlengahlengiswe kwaye isetyenziswe kwinani elikhulu lamazwe. I-gvSIG Batoví yisoftware ekhuthazwe liCandelo leSizwe loPhononongo lwesiCwangciso seCeibal, apho abafundi basePrayimari nabeSekondari baya kuba nakho ukufikelela kubutyebi bolwazi olumelwe yimephu.
"Ukususela ekuphunyezweni Ceibal Plan, urhulumente ufuna ukukhuthaza imigaqo ndikholiswe uphuhliso kunye nenzuzo kwimfundo yabantwana, ikamva lethu kunye ikhoyo eli lizwe," watsho Pintado, esongeza ukuba ngenxa iimpawu zayo geographical ilizwe lethu ayikwazi ukuvelisa impahla inkulu, "kodwa singakwazi ukuvelisa ulwazi ngaphandle komda woluphi uhlobo".
Ngexesha ntetho yale msitho entsha sixhobo kuyo yi Undersecretary yepotifoliyo, Ing. UPablo Genta, i-National uMlawuli Ukuma, Ing. Jorge Franco kunye Dean ye-Faculty of Engineering, Ing. Hector Cancela, uMphathiswa wathi ngaphaya ezi izibophelelo zemveliso, "Uruguayans ungahlula thina ngengqondo, ukukwazi ukuqalisa aphande, kunye nokudibanisa ulwazi kuphuhliso". "Kwaye loo nto, le software omtsha obizwa" gvSIG Batoví "iya kuba kubalulekile kuba kuvumela ukufikelela wendalo iphela ulwazi," utshilo.
I "gvSIG Batoví" imveliso inkqubo yonke National Bureau of umsebenzi Ukuhlola, i-Faculty of Engineering kunye gvSIG Association, kuya kunceda abafundi bafumane ulwazi yejografi ngokusetyenziswa kwe-XO laptop-frills -computer kwakhona kwandiselwa nakwezinye iindawo lwazi ezifana nembali, ibhayoloji, phakathi kwabanye.
Eyona nto inomdla kukuba unika u titshala kunye / okanye umfundi ukuba akhuphe imephu yabo ecacileyo esuka kwiindawo ezahlukeneyo zolwazi olukhoyo kwintsimi. Injongo kukukhuthaza ukufunda ngokufunyanwa, ukuguqula umsebenzi we-cartographic to a formative knowledge.
"I-gvSIG Batoví" sibonisa isethi yokuqala yamaphupha asetshenziswe ngaphambili kwintsimi yase-Uruguay, njengeemephu zezopolitiko kunye nezomzimba, ukuhanjiswa kwabantu, iziseko zothutho kunye noqhagamshelwano kunye nesimbozo somhlaba. Ukukhululeka kokufikelela kula maphepha acatshulwayo-njengoko iiplagi ezifakekayo ezivela kwisicelo ngokwawo-ziza kwenza ukuba ukwabelana okulula kwimizobo yokubala phakathi kootitshala nabafundi abavela kulo lonke uluntu lwabasebenzisi be-software.
Ngaphandle kwenkalo yezemfundo, abasebenzisi bezakhono zobuchwephesha be-gvSIG baya kukwazi ukufikelela kule mi sebenzi emitsha yokudala nokwabelana ngeemephu ngefayile yeefowuni, ngaloo ndlela ibe yinto entsha, elula kakhulu yokwabelana ngolwazi lomhlaba.
Iprojekthi ye-URL: http://www.gvsig.org/web/home/projects/gvsig-educa
Kubonakala kubaluleke kakhulu, nangona sizama ukusebenzisa iindaba ukuba zibeke ezinye zethu.
Umceli mngeni kwisiseko se-gvSIG kukuthengisa imodeli entsha, hayi isoftware. Ngokwam, yeyona nto indichukumisileyo kwaye ndiqhwabela izandla. Itekhnoloji kulula kakhulu ukuyithengisa kwaye i-gvSIG ngale ndlela iphumelele kakhulu, nangona ikwabize imali eninzi, umba abantu abaninzi abawubuzayo kodwa kufanelekile ukuba azikho izinto zasimahla kobu bomi. Ukuthengisa imodeli entsha kufuna isicwangciso songenelelo kwezentlalo, ezopolitiko kunye nezoqoqosho kumanqanaba ahlukeneyo. Oku kufuna imali eninzi kwaye iziphumo azikho kwangoko njengobungqina bomsebenzi wobugcisa. Kulapho isilumkiso sam sokuqala, kuba ukuba ubungqina bezobuchwephesha buyabuzwa, makungabikho bungqina bemodeli eya kuhamba ngokungafaniyo nangale ngxaki nasiphi na isizathu esivakalayo sokusika iinkxaso.
I-Latin America lilizwekazi elinamanqanaba ahlukeneyo okukhula kuzinzo lwezopolitiko, kwikhondo lolawulo, ekucwangciseni nasekunxibelelaniseni imfundo kunye nezopolitiko nezoqoqosho. Ngokuphathelene noku, inqanaba leziganeko kufuneka lisetyenzelwe ukuze iinzame zobugcisa zinxulunyaniswe nemigaqo-nkqubo yoluntu, eqinisekisa ukufezekiswa kwayo kwixesha eliphakathi. Awukho umsebenzi olula ukuba sithelekisa iyantlukwano yenkqubela phambili ukusuka eMexico ukuya ePatagonia. Ukuyicwangcisa iya kuba yeyona nto intle enokwenziwa.
Ke, kubandakanya iJografi enezixhobo zekhompyuter kwicandelo lezemfundo kubonakala kunomdla kuthi kwinqanaba lokungenelela eliphambili, eliphantse lathintela. Isicwangciso seCeibal linyathelo elityalwe kakuhle, kodwa kufuneka uqiniseke ukuba uyalixhasa iziko lalo okanye ukuba libonwa njengeprojekthi "yabathile abadlula apha." Inqanaba longenelelo lwesibini luza kuba ngumceli mngeni olungileyo, apho kufanelekileyo ukutshintsha indlela yokucinga yabo bathatha izigqibo nangaphezulu kwinqanaba lemfundo enomsila apho okushiyekileyo kukwenza iinzame zokuthomalalisa phambi kobubi obungenakuguqulwa.
Ingcebiso yam iphantse yafana. Kulumkele ukuba "yiTaliban" nayo. Kweli hlabathi, imithambo egqithisileyo kunzima ukuyigcina nangona iyasebenza. Inkqubo yendalo yetekhnoloji yangoku kufuneka igcinwe ngokubambisana kunye namanyathelo okuqala obunini kunye noMthombo oVulekileyo. Ngomzuzu wokuqala ukuba amacandelo ezoqoqosho alawula amazwe amaninzi aseLatin America azive ehlaselwe yimodeli, bavale iingcango nokuba oku kufuneka benze ubhukuqo-mbuso okanye balahle intsebenziswano yamazwe aphesheya. Kwaye emva koko, okucwangcisiweyo, okunxityelelaniswe nemigaqo-nkqubo yoluntu, abasebenzisi abakhusela oko bakuqondayo kwimodeli baya kuhlala.
Ngexesha elihle kunye ne-gvSIG Batoví
Post edlulileyo«Ngaphambilini Yintoni entsha kwi-AutoCAD, i-ArcGIS kunye ne-Global Mapper
Post Next Amanqaku ali-10 + ama-5 ekufuneka awakhumbule + 1 imagaziniOkulandelayo »
Impendulo enye ku "gvSIG Batoví, unikezelo lokuqala lwe-gvSIG yezeMfundo luthiwe"
Ngaba inqaku elilungileyo, izimvo zakho zisikhuthaze kwaye ngoku thina kwiYunivesithi yaseFrancisco José de Caldas eColombia sivula iqela lesoftware yasimahla kunye neNkqubo yeeNkcukacha zeJografi ebizwa ngokuba yi-SIGLA (Iinkqubo zeeNkcukacha zeJografi eziSimahla kunye neSoftware evulekileyo) kwaye ngoku siqala ukupapasha imixholo ngaphakathi http://geo.glud.org, si tyelele !!!